Monday September 07, 2020 - 12:26:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka afghanistan ayaa sheegaya in ciidamada imaarada islaamiga ah ay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen weeraro safballaaran ah oo lagu dilay askar farabadan.
Sida wararku sheegayaan dagaallo culus oo ka dhacay deegaannada Kalmiir iyo wadhi sheekha oo kawada tirsan gobolka Hiraat ayaa sababay dhimashada labaatameeyo askari oo katirsan xukuumadda camiilka ah ee afghanistan ka dhisan.
War rasmi ah oo kasoo baxay imaarada Islaamiga ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay qaraxyo miino ku burburiyeen illaa 6 gaari oo nuuca gaashaaman ah kadib markii ay haleeshay miino wadada hareeraheeda lagu aasay.
isla wilaayada Heraat Taliban ayaa beegsaday diyaarad dagaal oo isku dayaysay in ay soo farageliso dagaalka si ay uduqeyso mujaahidiinta, isku geyn khasaaraha ka dhashay dagaalladii shalay ayaa lagu sheegay 21 askari dhimasho ah iyo dhaawac halis ah oo gaaray 13 kale.
dhanka mujaahidiinta Taliban waxaa weeraradii shalay uga shahiiday 2 mujaahid halka 2 kale ay dhaawacyo soo gaareen.
Dhinaca gobolka samnajaan waxay mujaahidiintu kusoo rideen diyaarad Drone ah xilli ay howlgal basaasnimo ka wadday degmada Rabtaak oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka samnajaan.
Sawirro lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinayay diyaaradda soo dhacday oo ay gacanta ku hayaan ciidamo katirsan imaarada islaamiga ah.